सार्वजनिक यातायात चढ्ने तथा चलाउनेले के भोकभोकै मर्नु पर्ने हो ? | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ असार २१ गते १०:३६
सुभाष चन्द्र गिरी
सुभाष चन्द्र गिरी । विशवव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना माहामारीको असर सर्वत्र देखिएको छ । विश्वभरी कोरोनाले गर्दा भोकभरी हुने सम्भावना बढेको विज्ञहरुले बताईरहेका छन । यतिखेर मानिसहरु रोग सँग भन्दा पनि भोकसँग डराईरहेको अवस्था छ । नेपालमा पनि सरकारले झण्डै तिन महिना लगातार लकडाउन गरेपछि अन्ततः खुकुलो बनाएको छ, लकडाउन खुकुलो भएपनि सर्वसाधारणलाई भने कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भएको छ । लकडाउनमा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखान ठिक मिले जस्तै, लकडाउन खुकुलो हुदाँ पनि अवस्था उस्तै छ । करिव ७० प्रतिशत भन्दा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात बन्द छ, भने निजि गाडि तथा मोटरसाईकल हुनेहरू मजाले हिडरन तथा आफ्नो काम गर्न पाएका छन । तर दिनभरी दुख गरेर वेलुका छाक टार्ने वर्ग भने झन तनावमा परेको छ । काममा जाँउ भने गाडी छैन, कसरी जाने ? नजाँउ भने के खाने ? कसरी बाल बच्चा पढाउने के खुवाउने तथा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता छ ।
निजि कार काठमाडौंमा घर हुनेहरु लाई लकडाउनमा पनि चैन नै थियो खुले पनि चैन छ तर दिनभर काम गरेर विहान वेलुका छाक टार्ने वर्ग भने झन झन तनाव र चिन्तामा छ । त्यसैगरि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने दशलाख मजदुर तथा उनका आश्रित परिवार ४० लाख भन्दा बढि मानिसहरु ठुलो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन ।
सरकारले ठुलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भनिरहँदा सामान्य काम गरेर गुजारा चलाउने वर्ग वेरोजगार हुन पुगेको कुरा देख्न सक्नुपर्दछ । सर्वहाराको लागि काम गरेको भनेर पटक पटक गज्रिनेहरु अहिले सरकारमा छन । तर सर्वहारा भनिने वर्ग जसको भोट तथा ज्यानको वलिदानीले राज्यसत्तामा पुगेका हुन तिनै वर्गलाई विसिर्नु सर्वहाराको नाम लिएर माथि जानेहरुका लागि घातक हुन सक्छ ।
सार्वजनिक गाडी भनेको गिट्टी कुट्ने, मकै पोलेर बेच्ने, जुत्ता पालिस गर्ने, चटपटे बेच्ने, सानोतिनो जागिर र व्यापार गर्नेहरूको ‘मोबिलिटी’ हो । उनीहरूलाई सम्झिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाए सरकारको भूमिकाको प्रशंसाको हुन्छ, नत्र हुँदा खाने वर्गले देशमा सरकार नभएको महसुस गर्ने अवस्था आउँछ । जोखिम घटाउने अनेक उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन् । त्यसमा सरकारले विचार गरोस् । सरकारले ससार्वजनिक यातायातलाई पनि सामाजिक दुरि कायम गर्दै जोर विजोर प्रणलीमार्फत सुचारु गर्न सके लाखौं मजदुर तथा तिनका आश्रित परिवार त्यस्तै गरीब सर्वसाधारणलाई पनि राहात हुन्थ्यो कि ?